Ny tafa manokana nifanaovana tamin’ireto farany no nahafantarana fa tsy misy ahiana hatreto ny ain’ilay fianakaviana. Nentina nihazo fitsaboana any amin’ny hopitaliben’i Mahanjanga avy hatrany mantsy izy ireo raha vantany vao niharan-doza.
Vatan-kazo sy vato no nivelesan’ireo dahalo sy nitorahany ny lohan’ireo mpianakavy kely monina eo Tsenavao, fokontany sy kaominina Ambondromamy. Somary mitokana eny amin’ny faritra avaratra Ambondromamy no mipetraka izy ireo ka izao nohararaotin’ny tsy mataho-tody izao ny alin’ny sabotsy teo tamin’ny 8 ora. Raha ny loharanom-baovao any an-toerana, samy vaky loha avokoa izy telo mianaka ka nandriaka ny ra fa kelikely ny an’ilay renim-pianakaviana sy ilay zazakely. Ny raim-pianakaviana no voa mafy.
Voalaza fa handroba vola no anton-dian’ireo jiolahy saingy tsy voafaritra izany hatreto na dia betsaka aza noho ny mpitandro filaminana mbola miandry ireo lasibatra ho sitrana vao hanadihady. Ny famotorana ilay jiolahy iray tratra no hamaritra ny tohiny.